Etazonia: Miverina Indray Occupy Wall Street Na Bodoy Wall Street · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 03 Mey 2012 15:36 GMT
Maro ny olona no mifanontany amin'ny ho avin'ny Occupy Wall Street na Bodoy Wall Street taorian'ny nanesorana an-dry zareo tao amin'ny Zuccotti Park sy ny faharatsian'ny andro tsy ahafahan'ny mpibodo hilasy eny ivelany tamin'ny ririnina teo. Saingy lazain'ny mpibodo fa tsy nanjavona mihitsy ny hetsika ary tapa-kevitra hibodo ny toera-malalaka manerana ny firenena, tahaka ny efa ataon-dry zareo eo amin'ny Union Square [Kianjan'ny Sendikà?] ao New York City.
Tsy ny arabe ihany no raisin'ny hetsika. Natsangana tamin'ny 15 Febroary ny blaogy bitika antsoina hoe 99% Spring, izay anasan'ny fikambanana eo ho eo amin'ny 40 naka aingam-panahy avy amin'ny Occupy nanasa olona manodidina ny 100.000 amin'izao faraparan'ny fotoan-ketra any Etazonia izao hiresaka “ny tantaran'ny toekarentsika” manomboka ny 9 ka hatramin'ny 15 Avrily. Efa niantso hanaovana diabe niainga avy teny afovoan'i Manhattan ho any amin'ny Wall Street ihany koa ny mpibodo tamin'ny 1 mey. Nirodorodo tokoa ny fipoiran'ny hetsika Bodoy indray ka nandresy tamin'ny firotsaha-kofidiana tao amin'ny Kongresy ny iray tamin'ny mpikambana amin'izy ireo tany Philadelphia.
Nahatsikaritra ny fipoirana indray ny tontolom-bolongana. Mametraka ny bolongana Indignant Feminists [es] fa nihanatanjaka kokoa ny hetsika Bodoy tamin'ny alalan'ny fandraisana anjaran'ny vehivavy:
Aty amin'ny ilabolantany avaratra, ohatra, navitrika ny vehivavy tamin'ny fandraisana anjara hanombohana ny hetsika Ocuppy (Bodoy) [sic]. Saingy, tahaka ny tsikaritra ho ny lehilahy no tena betsaka ao amin'ity hetsika ity (ary tanora sy fotsy hoditra ny ao Etazonia) – sy ny tsy dia firaharahiana loatra ny zavamisy marina hoe tsy afa-miova ny kapitalisma raha tsy ny fototra ao aminy no donina: fanjakazakan'ny ray, izay miankina amin'ny fanaraha-maso sy ny fampiasana ny vehivavy. Ary ny vehivavy no mandrafitra ny 51% amin'ny 99% (ary 0% amin'ny 1%).
Nasongadin'ny bolongana Maestroviejo [es] fa natsangana teo amin'ny fiafaran'ny taona 2011 sy fanombohan'ny taona 2012 tany Minneapolis ny hetsika Bodoy:
Nandritra ny mihitsan-dravina sy ny ririnina, nanao hetsika tany amin'ny toerana samihafa tao Minneapolis tamin'ny alalan'ny fananganana tranolay ny mpanao fihetsiketsehana. Tohin'ireny hetsika ireny, niezaka ny handrara ny fidirana ao amin'ny toby amin'ny alina ny polisim-panjakana amin'ny alina ary manaisotra ny tranolain'ny mpandray anjara.
Mitsipaka ny filazan-kevitra hoe nandamoka Hetsika Occupy (Bodoy) ny mpisera tsy nitonona anarana iray (@YourAnonNews) ao amin'ny Twitter:
Eritrereto ho tsy nahomby hoe ity Occupy ity? niova tanteraka ankehitriny ny fomba fiteny sy ny lantom-peo iresahana ny toekarena sy ny WallStreet noho IO hetsika IO
Namoaka kapila ho fanomezam-boninahitra ny hetsika Occupy i Daltonicum (@Daltonicum):
Namoaka kapila mangilatra mitondra ny lohateny hoe “Occupy this Album” niarahana nanantontosa tamin'ny tarika tahaka an'i Mogwai ny hetsika “Occupy Wall Street” http://daltonicum.posterous.com/el-movimiento-occupy-wall-street-graba-un-dis
Jason Brickley (@azureblade7) nanoso-kevitra fa hiroborobo indray ny hetsika:
Fifohazana Lohataona: mitady ny hahatanora ny hetsika indray ny Occupy Wall Street
Nalaina avy amin'ny hetsika Occupy tao New York City ireto manaraka ireto (nalain'ny mpanoratra daholo izy ireto):
3 herinandro izayAngletera